JSC Inoendesa Mberi Bvunzurudzo dzeVanoda Kuve Vatongi veDare rePamusoro neChikonzero cheCovid-19
Judicial Service Commission yakazivisa kuti yave kumisa kubvunzurudzwa kwevari kuda mabasa evatongi vedare reHigh Court nekuda kwekukwira kwehuwandu hweCovid-19.
Judicial Service Commission inoti yaendesa mberi bvunzurudzo dzanga dzichifanirwa kuitwa kuvatongi vematare vavakanyorera kuti vapiwe zvigaro zvevatongi vedare repamusoro reHigh Court, idzo dzaifanirwa kuitwa kwemazuva matatu kutanga svondo rinouya.
Mugwaro rayakaburitsa nemusi weChina, komisheni iyi inoti yatora danho iri senzira yekuchengetedza hutano hwevane chekuita nehurongwa uhwu zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCovid-19.
JSC inoti veruzhinji vachaziviswa nezvemazuva matsva achabvunzurudzwa vatongi ava kana zvinhu zvagadzikana.
Vanhu makumi matatu nevatanhatu vanonzi vakanyorera kuti vawane mabasa aya, apo panodiwa vatongi vapfumbamwe chete.
Pasi pebumbiro remitemo yenyika, munhu anokodzera kuve mutongi wedare repamusoro anofanirwa kuve nemakore makumi mana kana kudarika, uye ari gweta rashanda kwemakore gumi.
JSC inozoendesa kumutungamiri wenyika mazita evanhu vainenge yakomekedza kuti vabudirira mubvunzo, mutungamiri wenyika ozotambira kana kuramba mazita aya.
Mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe, VaWellington Magaya, vanoti sesangano havashori danho reJSC iri nekuti kunzwisisa kwavo ndekwekuti raitwarichikoshesa hutano hwevanhu.vakawanda.
"Nechirwere chiripo ichi chedzihwamupengo hazvigoneki kuti vanhu vakawanda vaende uye zvinoisa vanhu vakawanda panjodzi."
VaMagaya vanotiwo komisheni iyi yaifanirwawo kuita zvechizvinozvino yoshandisawo dandemutande kuita bvunzo idzi, vachipa muenzaniso wematare edzimhosva ekuSouth Africa, ayo vanoti ari kufambisa matare kuburikidza nedandemutande.
"Dambudziko iroro rekuti zvinhu zviitwe padandemutande inyaya yatakambosimudzirawo tichiendesa kuJudicial Service Commission nekuti iko zvino mukatarisa matare edzimhosva akavhara mazhinji, kuri kungoitwa nyaya dzezvibatiso, ma bail, nenyaya dzinenge dzichida kuitwa zvechimbichimbi, dzimwe dzese hapana zviri kuitika," vanodaro VaMagaya.
Vanoti chazvinoreva ndechekuti mutemo wamira, hapana chiri kuitika, asi ipo paine nzira dzinoita kuti zvinhu zvikwanise kuitika pasina dambudziko, uye vanokurudzira Judicial Service Commission kuti ishandisewo madandemutande muhurongwa hwaichazoita munguva inotevera.